iOS 13 inogona kunge isingaenderane neiyo iPhone SE | IPhone nhau
Mushure mekutambudzika kwekutanga kweIOS 11, vakomana veCupertino vakasarudza kuti iOS 12 ndiyo ingangova iyoe yaizotarisa mukuvandudza mashandiro eIOS. Isu tese tine mukana wekunakidzwa neIOS 12, tinogona kutaura kuti mashandiro ayo anoshamisa, kunyangwe mumatemu ekare senge ma iPhone 5s.
Nekudaro, zvinoita sekunge iOS 12 haizongove yazvino vhezheni inoenderana neiyo iPhone 5s, asi ichave zvakare inowirirana neiyo iPhone 6, iPhone 6 Plus uye iPhone SE, zvirinani ndizvo inoratidza ruzivo rwakaburitswa nePhonesoft.fr. Zvinoenderana neiyi svikiro, aya matatu ma terminals haazovandudzwa kuIOS 13.
Mazano matsva muchimiro chechimiro chataigona kuona muIOS 13
Apple yakaparura iyo iPhone 6 uye iPhone 6 Plus muna 2014, uye vakave vanotengesa zvakanyanya, kunyanya nekuda kweiyo shuwa kuti vashandisi ve iPhone vaifanira kukwanisa kushandisa chinongedzo nehukuru screen iyo yaitarisirwa neIOS.
Zvinoenderana nesvikiro iri, Apple inoda kumira kupa rutsigiro kumatemu ese ane 4-inch screen, uko kuwedzera kune iyo iPhone 5s kune zvakare iyo iPhone SE. Nekudaro, idzi nhau dzinofanirwa kutorwa nezvimedu, nekuti Hardware yeiyo iPhone SE inenge yakafanana iyo yatinogona kuwana muiyo iPhone 6s uye iPhone 6s Plus, kunze kweiyo 3D Kubata tekinoroji.
Kana iPhone 6s uye iPhone 6s Plus zvichipindirana neIOS 13, hazvina musoro kuti Apple inoda kusiya iyo iPhone SE, kungoda kupedzisa rutsigiro rwunopihwa nhasi kune iPhones ine 4-inch screen.
Nezve iyo iPad, chete zvese iyo iPad mini 13 uye iyo iPad Mhepo yaizosiiwa kunze kweIOS 2, iPad yakaunzwa gore rimwe chete seiyo iPhone 5s. Izvo zviri pachena ndezvekuti kusvikira WWDC yabatwa isu hatisi kuzosiya kusahadzika, asi kubva pane iyi runyerekupe, ini ndinogona kungouya mukutenda kuti zvese zviri zviviri iPhone 6 uye iyo iPhone 5s ichasiiwa kunze nekuda kwekuti ivo vanogoneswa neisingasviki 2GB ye RAM.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 13 inogona kunge isingaenderane neiyo iPhone SE
Kana Apple ikasiya vashandisi ve iPhone 6 kunze kwekuvandudza, isu tinosiya Apple zvachose. Izvo zvatove zvakanaka zveakarongwa obsolescence.
jajajajjaja izvo munhu anofanirwa kuverenga zvinoita kuti chirevo chako chiseke iyo iphone 6 chishandiso cheanopfuura makore mashanu dai chaive paAndroid ingadai yakangowana zvigadziriso zviviri uye muna 5 ingadai yakarasa rutsigiro ndiwo mutsauko pakati peIOS ne android. ios iyo inopa mamwe makore ekutsigira kune ako ekare zvishandiso uye Android kwete chete makore maviri saka chii chimwe chaunoda iwe unoda sei mudziyo une 2 gb yegondohwe chete kuti uve neimwe yekuvandudza kupfuura kusetsa uye kana mumakore mashanu iwe usina wachinja mudziyo uye iwe uchienderera mberi neakare iphone 2016 zvinoratidza kuti iwe uri mumwe wevashoma zviwanikwa saka unoti kana yako yekare iphone 1 ikasagamuchira gadziriso, iwe unosiya apple zvachose uye unotaura kune wese munhu sekunge munhu wese aive neakafanana mediocre ndafunga iwe kufunga kwakashata ipapo apuro kwete Icho chinhu chako, rega kugunun'una utenge sarufoni, blackberry hachisi chinhu chakaderera-chako kwauri. Kutaurisa kwako kwakanyanya kwandakaona kubva pandakashanyira peji ino